Isoftware yeGIS elula: I-Client GIS ye- $ 25 kunye neServer yeWebhu ye- $ 100- Geofumadas
NgoJulayi, 2017 Okufumaneka, Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
Namhlanje siphila kwimiboniso enomdla, apho isoftware yasimahla kunye neyabanini ihlala khona, igalelo kushishino kwiimeko ezandayo zokukhuphisana. Mhlawumbi umba we-geospatial yenye yeendawo apho izisombululo zemithombo evulekileyo zomelele njengezisombululo zelayisensi ezingahlawulelwayo; Nangona kunjalo, sijamelene nezi zinto zimbini zibaxekileyo, intengiso ivela kwabo bangafuniyo ukuya evulekileyo, kodwa abangakwaziyo ukuhlawula iindleko zelungelo lokuthengisa elithandwayo. Le software engabizi.
Ezi zisombululo bezisoloko zitsala umdla wam, kuba ngendlela enomdla, zine-niche enomdla. Enye yezinto endandiyithanda kakhulu ngaphambili yayiyi-Manifold GIS.Namhlanje ndiqwalasele iSoftware yeGIS elula, usetyenziso olunezinto ezininzi ezinomdla ukuzazi nokuzivavanya.
Kulula kangakanani na? I-GIS Software elula
Isoftware yeGIS elula (SGS) ibonelela ngempendulo yomsebenzi evela kumacala amabini, hayi kuphela kwidesktop yesiqhelo, kodwa nakwintsebenziswano, ngomncedisi onokuthi abonelele ngeenkonzo zeWMS (OGC Standard). Le yokugqibela inomdla, kuba i-SGS ibonelela ngobuchule bokubamba, ukugcina, ukwenza ngobuqhetseba, ukuhlalutya kunye nedatha yendawo yangoku kunye nejografi; ukudibanisa amandla kunye namandla kwiziko ledatha yemveli.
Isindululo se-SGS kukuba isoftware ekulula ukuyisebenzisa, kunye nejika lokufunda elifutshane kunye nokulula kokwenza i-GIS ngesisombululo esingabizi mali ingama-25 eerandi. Uninzi lwento elula eyenziwa yi-GIS Software iyafana kakhulu nezinye izixhobo ezikhululekileyo nezobunini. mhlawumbi into enomdla ngesi sisombululo kukusebenziseka kwayo, ngokwenza ngendlela elula eyona nto ifunwa ngumsebenzisi, ngaphandle kwengxaki yamaqhosha amaninzi kunye neeplagi. Isoftware yeGIS elula ayivelisi kuphela kwaye ibonisa iimephu, kodwa ine (kwaye oku kubonakala ngathi inomdla) amandla okuhlalutya ukunceda ukusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani ngokubhekisele kubudlelwane bendawo phakathi kwezinto.
Ndikhuphele uvavanyo lwetyala, kwaye ndizamile ukukhuphela yonke idatha ye-OSM kwi-UTAH. Iqhubekile malunga nemizuzu eli-10, eyona ithathe owona mde umaleko wesitalato, kodwa kuba ndiyicelile ukuba ihambelane ne-geocode. Kubonakala kum kuyinto enomdla, ukuba ndingathanda ukuba ezinye izicelo zenziwe, kuba ekugqibeleni isinciphisile isiseko sombuso, yenze ulwakhiwo lwendawo yokusebenza kunye nokunyibilikisa imisebenzi yokuguqula idatha ibe zii-shp. Kunye nokuhlelwa kweVBA umhlobo wam «filiblue»Wenza uhlengahlengiso lokukhuphela isiseko semephu evulekileyo yesitalato eBogotá kunye ... njengomhlobo wethu, Bombazo!
Njengoko kuboniswe, ukusuka apha unako ukulanda iindawo ze-shp ze-Open Street Imephu yeBototá, phakathi kwe-coordinates -74.343, 4.536; -73.903,4.813.
Ukunyaniseka kubalulekile kwisiqingatha seyure ndizinikezele.
Inokulula ngokwaneleyo kuhlalutyo lophendlo oluhluziweyo, lwezicelo zohlobo lwe-geomarketing. Umthamo wento ebizwa ngokuba 'kukuphonononga kufutshane' kwale software kuvela ukuba isetyenziswe kakuhle yinkampani yeziseko zophando eqhuba izifundo zokwakha iindlela ukuze ichonge iindawo ezinokuba nefuthe. Idatha yeGPS inokudityaniswa ukubonisa ulwazi lwendawo yexesha lokwenyani okanye ukubonelela ngokuhamba kunye nolwazi lokuhamba kwisoftware.
Imephu yeemephu iyamkeleka, iyasebenza, icinga malunga noko ekugqibeleni ifuna ukuhambisa imibono.
I-GIS Client elula - Ideskithophu ye-GIS Software
Ixhasa idatha yevektha enje ngeeFomati, iiGrafiki ezilula zeGIS, i-DXF, iVector yeVenkile ye-GIS elula, iiLayers zomnyhadala kunye nezipredishithi kunye nasiphi na isiseko sedatha ngesihlanganisi se-ODBC. Uhlobo lwe-CAD lokuhlela lusebenza ngokufanelekileyo, kwimiyalelo eqhelekileyo enje nge-offset, trim, fillet, split, ngokusebenza kakuhle ekongezeni okanye ekususeni i-vertices, urhoxise / wenze kwakhona ongabulaliyo kwimemori, ngaphandle kokwenza imisebenzi enzima, inkxaso ye-cogo yeebheringi kunye imigama, kunye ne-snap esebenzayo. Ngamafutshane, ubungakanani bokuhlela ngokwaneleyo.
Eyona nto imangalisayo kukuba, imilo yokuhlela ifayile kwimowudi yabasebenzisi abaninzi. Ukuthathela ingqalelo ukuba le yifayile ye-archaic kunye nokusikelwa umda kweebhithi ezili-16 kuphela, ezize kuthi njengomgangatho wefektri kwaye ekunzima kakhulu ukuzisusa emva kweminyaka engaphezu kwama-20.
Ngokubhekisele kwinkxaso ye-raster, ibandakanya i-BMP, Jpeg, Tiff, Jpeg 2000, MrSid, Simple GIS MRI (multi resolution image), Simple GIS Server Image Layers, WMS and recently it is tessellated WMS (WMTS)
Umthengi olula we-GIS usebenza kwiMicrosoft yeWindows. Inamandla, ukukhanya kunye nokusebenza kokusebenza kwesoftware ye-GIS yesoftware. Kwimeko apho ufuna ukuyisebenzisela umhlaba okanye ukukhangela, ingaqhutywa kwithebhulethi exhasa iiwindows. Yenza imisebenzi eqhelekileyo yeemephu ezinemixholo, iiseti zokukhetha, ukuhluza, indawo kunye nemibuzo, ukuhlela kunye nokujonga iifayile ze-.shp kwimowudi yabasebenzisi abaninzi, inemisebenzi yokuhlela ephambili, imveliso yemephu, i-geocoding, indlela, phakathi kwabanye. Ndifumana umthamo wokukhuphela kwiseti yonke ye Idatha yeDatural Street evulekileyo, umzekelo, ilizwe lonke le-United States, kunye ne-geocoding kunye ne-state okanye nge-Zipcode.
Unokwenza iinkcukacha zeendlela zesitrato ezisemgangathweni kunye neendlela eziqhelekileyo ngokusebenzisa iikopi ezimbalwa. Iqulethe ezininzi iimpawu zokuqhubela izixhobo zokuthabatha iindawo zokuthakazelisa, ukukwazi ukwenza ngokwezifiso isofthiwe usebenzisa iVisual Basic for Aplicatons (VBA).
Ivelisa iziphumo zomgangatho owamkelekileyo onokuprintwa ngokuthe ngqo okanye zivezwe kwiifomati eziqhelekileyo zeefayile ukwenzela ukuba zifakwe kwezinye iipakethi zeekhompyutha.
Umncedisi olula we-GIS-isoftware yemephu ye-GIS
Ujongene nesidingo sokwabelana ngedatha ye-GIS ngenethiwekhi, indawo yasekhaya, ibhendi ebanzi okanye i-Intanethi, iServer elula ye-GIS iseva yeMicrosoft yeWindows esebenzisa i-TCP / IP kwaye iqulethe iseva ezimeleyo yeWebhu evumela ukukhonza i-vector kunye / okanye idatha ye-raster kubathengi be-GIS kuthungelwano lwedatha okanye ukubonelela ngeenkonzo ezivulekileyo zemephu zewebhu ze-geospatial (WMS). Inguqulelo entsha yeServer ivumela ukuthatha iimephu ezenziwe kumthengi olula we-GIS kwaye uzipapashe njenge-WMS ngendlela elula.
Ungakhonza idatha kwaye uqwalasele ukungqinisisa kwe-SSL. Kuyenzeka ukuba uyixhume kwi-AVL (Indawo yeZithuthi eziZenzekelayo) kusetyenziswa iplagi yolawulo lweGPS ekude.
Ukuqukumbela, i-Software ye-GIS elula, ngaphandle kokuba sisixhobo esijolise kubasebenzisi baseMntla Melika, inokubangela umdla njengesisombululo esinexabiso eliphantsi. Ngama- $ 25 bendilindele kancinane; Ngokoluvo lwam yisoftware enesakhono kubathengi-beserver, enobuchule obaneleyo
Ixesha liza kuxela ukuba likude kangakanani.
Le yiwebhusayithi ye-Website I-GIS Software elula. Ngolwazi oluthile malunga neKlayenti yeGIS elula, cofa apha. Ukuba ufuna ukufumana ngeSafa ye-GIS elula, cinezela apha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ndinedatha yeLiDAR - ngoku kuza kwenzeka ntoni?
Post Next Python: ulwimi ekufuneka phambili geomaticsOkulandelayo »